Fumana ukulungele ukuya kwi adventure Treasure 7×7. Le yenye eyona Bonus Slots Online ukuba an amazing Pirate isihloko. Kokuba imisiwe kwi lolwandle kunye ulwandle ecacileyo oluhlaza beach omhlophe sandy thema. Oku kuye yenzelwe yaphuhliswa IWG ngubani idume ekudaleni ezinye best Bonus Slots Online kushishino. Unga uwine ngisho ukuya £ 200,000 ibhonasi ibhaso ekupheleni ngeenxa yakho. Yandululwa 2016 kwaye iye yazuza enkulu umdlali isiseko ukususela. It has yonke imifanekiso ecacileyo kwaye upholile phezulu rated nemisindo ku 16 iindlela ezahlukeneyo ukuze uwine. Ngoko apakishe ibhegi yakho ibhodi ukuba Pirates nqanawa ukuqala adventure yakho kwenye the best Bonus Slots Online.
Joyina I Hunt For Treasure 7×7 kule omnye Ibhonasi kuphela Slots Online
le umdlalo slot has a kulula kakhulu ujongano kunye nemizobo zenzelwe ukuba silingane isihloko ngokugqibeleleyo. Kwikhusi, uya kubona iitafile ezimbini ichasene unxweme lolwandle. Le theyibhile lokuqala 7×7 itheyibhile iibhokisi awahlukeneyo imikrolo ezinxulumene nomxholo kwaphela, neeperile, umnqwazi P, skull, umsesane, inqanawa kweflegi nkqu inqanawe abaphangi. Kwelinye itafile, ezi ezinye iingcango ngomthi mbuzo uphawula phezu kwabo. Nazi 12 neminyango zizonke. umgca ngamnye 7×7 ibhokisi lokuwina kubhalwe kuyo. Khetha Ndiyakuthanda ukwenza / ukukhubaza izandi ukudlalwa zinikwe kuncedo lomdlali oyiphetheyo. Le RTP okanye izinga dwa kule ungakwazi ukufikelela ukuya kutsho 89.90% leyo kakhulu xa kuthelekiswa namanye Bonus Slots Online.
Konke malunga Ukudlala
Le Ukudlala yale slot kulula ngokwenene. Kukho iitafile ezimbini, nguye has 49 iibhokisi omnye unesifo 12. Xa yokuqala uya kucelwa ukuba ukuseta ukubheja kwakho ngokunqakraza kwi + kwaye – ukhetho. emva kokuba oku, kufuneka ukhethe 7 ngaphandle 12 iibhokisi. Ibhokisi nganye iya kutyhila uphawu. Ukuba phawu kufana phezu 7×7 igridi, ibhokisi uza phawulwa kwaye nesimboli uya bawela kuluhlu. Ukuze wenze win, kufuneka uwele zonke iisimboli kwi nokuba oxwesileyo, nkqo okanye umgca oxwesileyo. Oku kuthetha ukuba lonke 7 neesimboli kumgca ziphawulwe. Ukuba ngaba ufuna ukukhetha i 7 ibhokisi ngokwakho, unga nqakraza kwi & ngokuzenzekelayo ukhetho yaye le software kuyenza.
graphics oluhle, imisindo umdla kunye umdlalo ovusa zizinto ezichaza le umdlalo slot ngokufanelekileyo. A edl amandla enkulu na esinye isizathu sokuba ibeka oku phakathi best Bonus Slots Online.